जलन्धरमा फसेको एक यात्री
मीनराज वसन्त शनिवार, भदौ २४, २०७४ 6762 पटक पढिएको
२४ अप्रिल २०१७ । घडीमा रातको १० बजिसकेको थियो । म आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिँदै दिल्लीको आईएसबीटी अर्थात् इन्टर स्टेट बस टर्मिनलबाट पञ्जाबको अमृतसरका लागि रवाना भएँ । गन्तव्य गुजरात (सुरत) त हुँदै हो । तर अमृतसर पुगेर एक झलक गोल्डन टेम्पल हेर्ने आफ्नो हठको सम्मुख म आफैं निरीह थिएँ ।
अमृतसर उत्रेर घडीसँग आँखा जुधाउँदा बिहानको साढे चार भइसकेको रहेछ । तारिख फेरिएछ । रातले कोल्टे फेर्न भ्याएछ । चराहरूले कोलाहलमय संगीतको थालनी गरिसकेका थिए । बिहानपख सिरसिरजस्तो हावाको लहरो चल्दै थियो । सामान्य टिसर्ट लगाएको ज्यानमा दुब्ला र होचा काँडाहरू उम्रिएको देखेँ । रौंहरूले चनाखो बनेर कान ठाडा पारेजस्तै लाग्यो । व्यग्र गर्मीको सिजन भए पनि दिल्लीको अनुपातमा पञ्जाब केही चिसो सहर मानिन्छ । तर, महँगो भाडा तिरेर वातानुकूलित बसमा सफर गर्दा पनि केके नपुगेको आभाष भने भइरह्यो ।
आफूसँग आफ्नै भाषामा गफिने मान्छे नहुनुले पनि यस्तो लागेको होला, मैले यसभन्दा धेरै केही सोचिनँ । तर, एक्लै यात्रामा निस्कनुका सामान्य फाइदामध्ये एउटा ठूलो बेफाइदा यो पनि रहेछ भन्ने पाठ सिकिरहेको थिएँ । कतिसम्म भने, सबैका तस्बिर खिचिहिँड्ने म आफूलाई मन लागेको ठाउँ र पोजमा आफ्नै तस्बिर लिइदिने दोस्रो व्यक्ति नहुनु पनि कम पीडाको विषय थिएन ।
काठमाडौंका गेस्ट हाउसवालाहरूकै शैलीमा अमृतसरमा पनि एउटा गेस्ट हाउसवाला 'पाजी' देखाइपर्‍यो । उसँगको बार्गेनिङपश्चात् अन्ततः पाँच सय रुपैयाँमा मध्यान्ह १२ बजेसम्म चेक आउट भइसक्नुपर्ने मौखिक सहमतिसहित एउटा कोठा लिएँ । दुई दिनदेखिको अनिँदो, लगातारको यात्राले दिएको थकान र शरीर शुद्धिका लागि पनि कोठा नलिएर धर थिएन ।
केही घण्टाको आरामपश्चात् नुवाइधुवाइ गरेर बाहिर निस्कँदा घामको नेप्से क्रमशः बढ्दै रहेछ । यससँगै मान्छेको चहलपहल पनि बढ्दै थियो । अब चराहरूको संगीत कतै विलुप्त भइसकेको थियो । बरु बस, टेम्पुलगायतका अन्य सवारीसाधनबाट एकोहोरो हर्न मात्रै निस्किइरहेको थियो । यात्रु चढाउने होडमा दुई पक्षका टेम्पु चालकबीच तीता-टर्रा गालीको आदानप्रदान आक्कलझुक्कल मेरा कानसम्म पनि आइपथ्र्यो । त्यही कोलाहमा टीभी तथा रेडियोको माध्यमबाट मिसिन आइपुगेको थियो- गुरुवाणी अर्थात् भक्तिगान । जुन गोल्डन टेम्पलबाट लाइभ प्रसारण हुन्थ्यो ।
जब उसले पैसा छ-छैन भनेर सोध्यो, अचानक मेरा आँखाबाट बाँध फुटेजस्तै गरी आँसुको निष्कासन हुन थाल्यो । यसरी त मेरी आमाले बाहेक कसैले सोध्दैन पनि । तब, आफ्ना आँसु आफैं पुछ्दै 'एक रूपैयाँ भी साथ में नहीं' भन्दै रुँदै, रुँदै भन्दै गरेँ ।
होटेलबाट लगभग दुई किलोमिटर पर्थ्यो गोल्डन टेम्पल । जसलाई गुरुद्वारा मात्रै नभई स्वर्ण मन्दिरको नामले पनि चिनिन्छ । बिहानको हिँडाइ स्वास्थ्यका लागि समेत राम्रो भएका कारण टुक्रुटुक्रु पैदल नै हिँड्ने निर्णय गरेँ ।
जतिजति दूरी छोटिँदै जान्थ्यो, त्यतित्यति सडक सफा र व्यवस्थित देखिँदै गयो । टायल लगाइएको सफा सडक । मान्छेहरूको बाक्लो आवत्जावत भएर पनि शान्तप्रायः वातावरण । विभिन्न चोक, गल्लीहरूमा ठुल्ठूला साउन्ड बक्स लगाएर गुरुद्वाराको भजन प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको थियो । नबुझेतापनि कुनै मन्त्रोच्चारण जस्ता लाग्ने भजनहरूले आनन्दको असीम गहिराइमा मलाई आफूतिर चुम्बकीय शैलीमा खिचिरहेका थिए । हृदयका तारहरू झनन झनन झंकृत भएको आभाष पाउँथे । रक्त कोषिकाहरूमा अपूर्व आनन्दको सञ्चार भइराखेको थियो ।
कडा चेकजाँच गराएपछि मात्रै गोल्डन टेम्पल प्रवेशका लागि अनुमति मिल्यो । शिरमा कुनै वस्त्र वा रुमाल राख्नु अनिवार्य रहेछ । जुन नियम 'रब ने बना दी जोडी'मा शाहरुख खानले पनि पालना गरेको देख्न सकिन्छ । तर, आफूसँग त्यस्तो कुनै वस्त्र नभएका कारण, दस रुपैयाँ तिरेर 'गोल्डन टेम्पल' लेखेको रुमाल किनेँ । त्यसपछि 'निःशुल्क जुत्ते चप्पल' स्टलमा आफ्ना चप्पल राखेर त्यो विशाल, भव्य, शान्त र सौम्य परिवेश अवलोकन गर्न मेरा आँखाहरूले शरीरलाई पनि चलायमान बनाइदिए ।
गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा, हरमन्दिर साहिब जे भने पनि उनै सिख धर्मावलम्बीहरूको पावनतम तीर्थस्थल हो यो । सन् १५७४ मा सिख धर्मका चौथा गुरु रामदासजीले यसको स्थापना गरेका भए पनि पाँचौँ गुरु अर्जुनदेवले सन् १५८८ मा यसको निर्माण आरम्भ गरी सन् १६०४ मा पूर्णता दिइएको थियो । झन्डै चार सय वर्ष प्राचीन गुरुद्वाराको डिजाइन स्वयं अर्जुनदेवले गरेका थिए, इतिहास यही भन्छ । उक्त गुरुद्वाराको शिल्प र सौन्दर्य देखेर मोहित नहुने कोही छैन ।
सुनको परत लगाएको उक्त गुरुद्वाराको चार दिशामा प्रवेशार्थ चार मूल द्वारहरू छन् । समाजमा रहेका चार जातिका लागि भनेर चारद्वार बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्दिरको वरिपरि कञ्चन, निर्मल र शान्त सरोवर छ । जसलाई अमृत सरोवर पनि भनिँदो रहेछ । कालान्तरमा यसकै नामबाट जिल्लाको नाम पनि अमृतसर रहेको रहेछ । मुख्यतः सिख धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर भए पनि सबै जाति-धर्मका मानिस बिना भेदभाव यहाँ आउने गर्दछन् ।
अमृतसरपश्चात् अबको यात्रा पञ्जाबकै चण्डीगढको थियो । चडीगढलाई कामुक सहरको नाममले समेत चिनिन्छ । भारतमा दुईवटा राज्य हरियाणा र पञ्जाबको एउटै सदरमुकाम पनि चण्डीगढ नै हो । जहाँ मसँग सम्पर्कमा रहेका एकजना नेपाली भाइ श्रम गर्थे । खासमा उनकै आग्रहमा चण्डीगढ पुग्ने तालिका बनेको थियो मेरो ।
गोल्डन टेम्पल घुमफिरपछि उनलाई निकैबेर फोन गरिरहेँ । घण्टी गइरह्यो, तर उठेन । पटकपटकको प्रयासमा पनि फोन नउठ्दा अब भने 'दाल में कुछ काला है' लाग्न थालिसकेको थियो । उसो त अघिल्लो दिन दिल्लीबाट पञ्जाब हिँड्ने बेलामा पनि उनलाई फोन गरेर लोकेसन नसोधेको होइन । जवाफमा उनले— 'पहिले अमृतसर आइपुग्नु । बाँकी कुरा फोन छँदैछ, गर्दै गरौंला नि' भने । यसलाई सामान्य रूपमा नै लिएँ मैले । तर जब अमृतसरदेखि चण्डीगढ हिँड्ने बेलामा फोन उठेन, तब अघिल्लो दिन उनले गरेको नागबेली बाटोजस्तो कुराको रहस्योद्घाटन भएझैं लाग्यो ।
अबको विकल्प के ? पञ्जाबपछिको यात्रा सोझै मोदीको गृहजिल्ला गुजरात थियो । अमृतसरदेखि गुजरातका लागि बस नपाउने जानकारी पाएपछि पञ्जाबकै अर्को जिल्ला जलन्धर पुग्नुपर्ने देखियो । स्थानीयको भनाइमा त्यहाँबाट गुजरात जाने बस सहजै पाउन सकिन्थ्यो ।
म होटेलबाट चेक आउट भएर जलन्धरको बसमा बस्दा उनै भाइको फोन आयो । उनले अनेक भूमिका बाँधेर यावत् कारण देखाए । 'दाइ ! म तुरुन्तै दिल्ली जानुपर्ने भयो' उनले भने- 'यसपटक भेट हुने भएन दाइ । मलाई माफ गर्नुहोला ।'
फोनमा उनको आवाज सुनिरहँदा ओठ थरथरी काँपिरहेका छन् भन्ने प्रष्टै थाहा लाग्थ्यो । तर, एउटा कामदारको अचानक दिल्ली यात्रा तय हुनु, अघिल्लो दिन फोनमा स्पष्ट तरिकाले नबोल्नुले यो सब झुट हो भन्ने प्रमाणित गर्दथ्यो । यदि, यसमा साँच्ची नै सत्यता छ भने उनै जानुन्, यसमा म क्षमाप्रार्थी पनि छु । तर, यस्तो गजबको संयोग सायदै बन्छ । अनि अन्त्यमा उनले, 'फेसबुकमा मेसेज पनि छाडेको छु' भने । म पनि के कम ? तुरुन्तै फेसबुक खोलेर उनले पठाएको मेसेजको समय र मोबाइलमा कुराकानी गरेको समय मिलाउँदा फोनपछि मात्रै मेसेज पठाएको भन्ने पुष्टि हुन आयो ।
जलन्धर बस अड्डा आइपुग्यो । कैयौं दिनदेखि पिठ्युँमा गह्रौँ झोलाले थिचिरहेकै थियो । घाँटीमा गरुंगो क्यामेराको माला थियो । गर्मी उस्तै । शरीरबाट चिटचिट पसिना छुटिरहेका थिए । धुलोले बालुवाजस्तै खस्रो बनाइदिएको थियो आफ्नै चेहरा । खाना खाने कुनै समय थिएन । दिसा-पिसाबको डरले भोकै-तिर्खै पनि हुन्थेँ । किनकि, नेपालको भन्दा बेग्लै थियो त्यहाँको सिस्टम । सरकारी बस भएकोले बसहरू केवल बसअड्डामा मात्रै रोकिन्थे । त्यो पनि निश्चित समयका लागि मात्र । न क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्थे, न जहाँ दिसा-पिसाब लाग्यो त्यहीँ रोकिन्थे । आफ्नो र बसबीच तालमेल नमिल्न सक्थ्यो । त्यसकारण तिर्खा लाग्दा घाँटी भिजाउनु र भोक लाग्दा स्वाद चाख्नुबाहेक मसँग यात्रामा अर्को उपाय थिएन ।
जलन्धर पुगेर सोध्दा त्यहाँबाट पनि गुजरातको लागि बस नपाइने जानकारी हात लाग्यो । मलाई भने त्यसै विरक्त लागेर आयो । यात्राको उत्साह र रोमाञ्चकता स्खलितसरह भएको थियो । पहिल्यै सुकिसकेका ओठमुख थप के सुक्नु थियो र ! यदि बसद्वारा नै गुजरात जाने भए फर्केर पुनः दिल्ली जानुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा उल्टो बाटो पथ्र्यो । अब एकमात्र विकल्प रेल नै रह्यो ।
बस अड्डाबाट टेम्पु लिएर असिनपसिन हुँदै म रेल्वे स्टेसन पुगेँ । तर, गुजरातको लागि सातामा कतिदिन ट्रेन जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन । त्यसको लागि 'पुछताछ' जरुरी थियो । बाहिर टाँगिएको चार्ट हेरेर पनि पत्ता लगाउन नसकेपछि 'पुछताछ'को लाइनमा उभिएँ । मेरो अगाडि दुई-तीनजना र पछाडि पाँचसात जना मात्रै थिए । खासै भीड थिएन ।
'सुरत नु गड्डी किन्ने बजे है जी' मैले पञ्जाबीमै सोधेँ । यसरी पञ्जाबीमै सोध्नुको कारण, पञ्जाबी मोहमात्र नभएर मलाई पनि बोल्न आउँछ भन्ने प्रमाण थियो । भित्रबाट 'टेन थर्टी' भन्ने जवाफ आयो । जुन ट्रेन अमृतसरबाटै छुट्थ्यो र जालन्धर, सुरत हुँदै मुम्बईसम्म पुग्थ्यो । तर म ? म भने सजिलो यात्राका लागि बसको चक्करमा उल्टो बाटो हिँड्न खोजिरहेको थिएँ । अमृतसरबाटै प्रस्थान गर्ने ट्रेन पकड्न म जलन्धर आइपुगेको थिएँ ।
जसै लाइनबाट निस्किएँ, शरीर केही हल्का भएको महसुस गरेँ । तर, पिठ्युँमा उही झोला, घाँटीमा भिरिराखेको क्यामेरा थियो । अनि सबै ठीकठाक हुँदा किन अचानक मलाई शरीर हल्का लाग्यो, म आफैंले पत्तो पाइन । एकछिनपछि टिकट काट्न जानुपर्‍यो भनेर पर्स निकाल्न खोजेको त, ज्या ! पाकेटमार भइसकेछ ।
जे थियो सबै पर्समा नै थियो । एसबीआईको एटीएम कार्ड, पाँचसात हजार नगद, प्रेस कार्ड, बैंक डकुमेन्ट्स् आदि इत्यादि । पर्सबाहेक बाहिर फुटेको कौडीसमेत थिएन । हँ, बिहानसम्म दुई हजारको नोट पाइन्टको चोर खल्तीमा सुरक्षित थियो । त्यो पनि 'अब गुजरात गइहालिन्छ नि' भन्ठानेर पर्समा राखेको थिएँ । तर अब मोबाइलमा तीस रुपैयाँ ब्यालेन्सबाहेक मसँग अरू कुनै ब्यालेन्स थिएन । एकछिन त पर्स चोरी भएको पनि सामान्य लाग्यो । तर, बाँकी यात्रा पनि पर्ससँगै हराएको सम्झिँदा रुँरुँ लाग्यो । पैसा हराएकोमा त्यति चिन्ता थिएन, जति चिन्ता परदेशमा अलपत्र परिनेको थियो ।
सबैभन्दा पहिले गुजरातको साथी कमल एकतारेलाई फोन गरेर दुई सय रूपैयाँ ब्यालेन्स राखिदिन आग्रह गरेँ । उनले तुरुन्तै मेरो आग्रह माने । लगत्तै नेपालमा हरिश दाइलाई फोन गरेर एसबीआईको एटीएम कार्ड डिसेबल गर्न लगाएँ । त्यो काम पनि भयो । अब के गर्ने ? मेरो दिमाग अनियन्त्रित भइसकेको थियो ।
भारतमा प्रशस्तै साथीभाइहरू भएकाले कतै न कतैबाट सहयोग हुनेमा संकोच थिएन । बरु यहीँ पञ्जाबमै कोही थिएनन् । म भटाभट साथीभाइलाई फोन मिलाउन थालेँ । तर नेपालको जस्तो पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न सहज थिएन । कि त बैंक टु बैंक कारोबार गर्नुपथ्र्यो । कि कसैले पठाएको पैसा लिन आफूसँग कुनै कागजात हुनुपथ्र्यो । तर, यी दुवै उपायका लागि म 'समस्या' नै थिएँ । साथीभाइले पनि सहानुभूति मात्रै प्रकट गर्न सके ।
अन्ततः म सहायताको लागि 'रेलवे पुलिस बल'को बिटमा पुगेर घटनाको जानकारी गराएँ । अफसोच, ड्युटीमा रहेका जवानले आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै कोतवाली (थाना) जानुपर्ने बताए । ओठ अब सुकिसकेका होइन, फुटिसकेका थिए । चोरीको पीडाले भतभती छाती पोलिरहेकै थियो । त्यसमाथि आगोमा घिउ थप्न गर्मी पर्याप्त थियो । सम्झेँ— 'मर्निङ सोज् द डे' । दिन खराबको लक्षण त बिहानै देखिएको थियो नि !
कोतवाली पुगेँ । अशोक कुमार र दिलवाग सिंहका दुई सिनियर रेलवे पुलिस त्यहाँ थिए । अशोकले सुरुमा निकै केरकारको शैलीमा सोधपुछ गरे । 'नेपाल में क्या करते हो ? ' भन्ने उनको प्रश्नमा 'जर्नालिस्ट हुँ भनेपछि अकस्मात् उनमा नम्रता अंकुरण भयो । मैले आफ्नो पर्समा रहेका सामान भन्दै गएँ, उनले डायरीमा नोट गर्दै गए । र उनले एफाइआर् दर्ज भएको खबर दिए । स्मरण छ, भारतमा बलात्कार, हत्या, दमन आदिका घटनाहरूको पनि पुलिसले एफाइआर् दर्ज गर्न अस्वीकार गरेका धेरै समाचार आउँछन् । यहाँ त रिपोर्ट दर्ज हुनुपनि ठूलै कुरा हो ।
'खाना खाया कि नहीं ? ' एउटा सिनियर पुलिसले मप्रति देखाएको यो सद्भावले केही खुसीका झिल्काहरू ल्याउने प्रयत्न गर्‍यो । उसको मानवता देखेर धन्य भइरहेको थिएँ । तर, खासमा खाना खाएको चाहिँ थिइनँ । मलाई पेटले मागेको खान्कीभन्दा कथाले मागेको समस्या विकराल थियो । त्यसैले भनिदिएँ- 'जी, खाया हँ ।'
'और पैसे ? ' उसले फेरि सोध्यो ।
जब उसले पैसा छ- छैन भनेर सोध्यो, अचानक मेरा आँखाबाट बाँध फुटेजस्तै गरी आँसुको निष्कासन हुन थाल्यो । यसरी त मेरी आमाले बाहेक कसैले सोध्दैन पनि । तब, आफ्ना आँसु आफैं पुछ्दै 'एक रुपैया भी साथ में नहीँ' भन्दै रुँदै, रुँदै भन्दै गरेँ । यसरी त्यो पनि परभूमिमा रोएको मलाई कुनै सम्झना छैन । पछिल्लोपटक कहिले यसरी रोएँ हुँला, त्यो पनि स्मृतिका कुनै कुना-कन्दरामा छैन ।
'गुमसुदगी' लेखिएको एउटा कागज अशोकले मेरो हातमा थमाए । त्यहाँ टुटेफुटेको हिन्दीमा घटनाको सम्पूर्ण विवरण पनि लेखिएको थियो । तलपट्टि 'पञ्जाब रेल्वे पुलिस'को मोहर लगाएर हस्ताक्षर गरिएको थियो । जुन कागज देखाएकै भरमा अल इन्डिया ट्रेनमा निःशुल्क यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । तर, बसको लागि मान्यता थिएन । यदि म गुजरातको सुरतसम्म ट्रेनमा निःशुल्क गए पनि त्यहाँबाट जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्मको बसभाडा लगभग सय रुपैयाँ थियो । मसँग भने अब एक पैसा पनि बाँकी थिएन ।
नेपालबाट हरिश दाइको फोन आयो । दाइले पनि पैसाको कुरा सोध्नुभयो । मैले पैसा नभएको बताएँ । 'म गुजरातको एजेन्टलाई फोन गरेर सोध्छु' दाइले यति भनेपछि पर्स नहुँदाको जस्तै शरीर हल्का भयो मेरो । दुखेको घाउमा लगाउने मल्हम नहुँदा फुकेर पनि शीतल महसुस हुने रहेछ ।
केहीबेरमै नयाँ नम्बरबाट कल आयो, जुन कल हरिश दाइको सिफारिसमा गुजरातको कुनै अज्ञात व्यक्तिले सहयोगको खातिर गरेको कल थियो ।
उसले जलन्धरको आफ्नो एजेन्टको नम्बर टिपायो मलाई । मैले उक्त व्यक्तिलाई कल गरेर आवश्यक पैसाबारे बताएँ । उसले पैसा लिन आउने लोकेसन दियो । तर, मसँग टेम्पु वा रिक्साबाट त्यहाँसम्म पुग्न पनि सम्भव थिएन । पछि एउटा रिक्सालाई मान्छे भेटेर पैसा हात परेपछि मात्रै भाडा दिने सर्तमा उसले दिएको लोकेसन पछ्याउँदै गयौं । यसरी गुजरात (सुरत) यात्राको लागि पैसाको जोहो हुन सक्यो ।
जाँदाजाँदै यात्राले धेरै कुरा सिकाएर गएको छ । पढेरभन्दा परेर जानिएका छन् केही । अनुभवहरूको ग्रन्थमा एउटा अर्को अनुभव थपिएको छ । जिन्दगीका अविस्मरणीय यात्राहरूमा पञ्जाब-गुजरात यात्रा सधैंसधैं रहिरहनेछ ।
प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? 11428
लालबाबुको दोस्रो अवतार 2445
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 3751
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, नौ घाइते 189
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 3828
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 947